Inona no Atao hoe Finoana? | Tena Finoana
‘Tahafo ireo mandova ny fampanantenana noho izy ireo nanana finoana sy faharetana.’—HEBREO 6:12.
1, 2. a) Inona no nampiavaka ny mpiandraikitra iray? b) Tianao ve ny hinamana amin’ireo olona voatantara ao amin’ny Baiboly? Nahoana?
NANAO lahateny ny mpiandraikitra mpitety faritany iray efa zokiolona, ary niresaka olona maromaro ao amin’ny Baiboly. Hainy tsara mihitsy ny toetran’izy ireo, ka niaiky ny anabavy iray hoe: “Hoatran’ireny namany efa ela ireny ry zareo.” Tsy mahagaga izany satria efa am-polony taona io rahalahy io no nandalina sy nampianatra ny Tenin’Andriamanitra. Lasa fantany tsara àry ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana fahiny, ka hoatran’ny hoe namany efa ela.
2 Hoatr’izany koa ve izy ireny aminao? Tsy mba tianao tokoa ve ny hinamana amin’i Noa, na Abrahama, Rota, Elia, na Estera? Eritrereto hoe miara-mitsangantsangana aminy ianao, dia miresaka eny ianareo ka lasa mifankahalala tsara. Dia manoro hevitra anao izy sady mampahery anao. Hahafinaritra be angamba izany sady hahasoa anao!—Vakio ny Ohabolana 13:20.
3. a) Inona ny torohevitr’i Paoly ho antsika? b) Inona avy ny fanontaniana hodinihintsika?
3 Marina fa amin’ny fotoana ‘hitsanganan’ny marina’ vao tena ho tanteraka izany. (Asa. 24:15) Dieny izao anefa isika dia efa afaka ny ho naman’ireo olona nanam-pinoana fahiny, raha manahaka ny finoany sy ny faharetany. Hoy mantsy ny apostoly Paoly: ‘Tahafo ireo mandova ny fampanantenana noho izy ireo nanana finoana sy faharetana.’ (Heb. 6:12) Handinika ny tantaran’ireo mpanompon’i Jehovah fahiny isika ato amin’ity boky ity. Hojerentsika anefa aloha ireto: Inona marina no atao hoe finoana? Nahoana isika no mila azy io? Ary ahoana no hanahafantsika an’ireny mpanompon’i Jehovah fahiny ireny?
4. Inona ny hevitry ny olona maro momba ny atao hoe finoana, ary nahoana izy ireo no diso hevitra?
4 Toetra tena tsara ny finoana, ary izy io no nampiavaka an’ireo lehilahy sy vehivavy tantaraina ato. Maro anefa no tsy mahalala ny atao hoe tena finoana. Heveriny fa hoe mino befahatany fotsiny ianao fa tsy manana porofo akory. Ny olona tena manam-pinoana anefa tsy hoe minomino foana. Tena ratsy mantsy izany. Tsy hoe entin’ny fihetseham-po fotsiny koa izy, ka tonga dia mino. Mora miovaova mantsy ny fihetseham-po. Ny tena finoana koa tsy hoe mino fotsiny fa misy Andriamanitra, satria na ny demonia aza “mba mino ka mangovitra.”—Jak. 2:19.
5, 6. a) Inona ireo zavatra roa nasongadin’i Paoly? b) Inona ny fanoharana mampiseho fa manana porofo mazava isika matoa mino?
5 Hafa mihitsy ny famaritan’ny Baiboly ny tena finoana ao amin’ny Hebreo 11:1. (Vakio.) Misy zavatra roa asongadin’i Paoly ao. Voalohany, ilay teny hoe “zavatra tena misy izay tsy hita maso.” Tsy hitantsika maso, ohatra, i Jehovah sy ny Zanany ary ilay Fanjakana any an-danitra, nefa tena misy izy ireo ka inoantsika. Faharoa, ilay teny hoe “zavatra antenaina.” Marina fa mbola amin’ny hoavy vao hitranga ny zavatra sasany antenaintsika, anisan’izany ny tontolo vaovao, nefa toy ny hoe efa tena hitantsika sahady ilay izy. Minomino fotsiny an’ireo zavatra roa ireo ve anefa isika, fa tsy manana porofo akory?
6 Tsy izany mihitsy! Manazava i Paoly fa manana porofo mazava isika matoa mino. Nampiasa an’ilay teny hoe “fiandrasana amin-toky” izy, ary midika ara-bakiteny hoe “taratasy fanamarinam-pananana” izy io, amin’ny teny grika. Aoka hatao hoe misy olona te hanome trano anao. Sady manolotra anao ny taratasin’ilay trano izy no miteny hoe: “Omeko anao ity trano ity.” Tsy hoe iny taratasy iny akory ilay trano. Porofo ara-dalàna sady mazava kosa iny fa anao ilay trano, ka raha manana an’iny ianao, dia toy ny hoe efa manana an’ilay trano mihitsy. Toy izany koa ny finoana. Marina fa tsy hita maso ilay zavatra inoanao, nefa manana porofo mazava be ianao hoe misy ilay izy, ka toy ny hoe iny porofo efa anananao iny mihitsy ilay zavatra inoanao.
7. Inona no atokisantsika raha tena manam-pinoana isika?
7 Ny olona tena manam-pinoana àry dia manana porofo mazava, ka matoky tanteraka an’i Jehovah, sady tena resy lahatra. Mino isika fa tena tia antsika izy ary toy ny raintsika mihitsy. Matoky koa isika fa hotanterahiny daholo izay nampanantenainy. Toy ny voninkazo anefa ny finoana. Mila tondrahana ny voninkazo mba tsy halazo. Toy izany koa fa mila aseho amin’ny atao ny finoana, raha tsy izany dia maty.—Jak. 2:26.
8. Nahoana no tena ilaina ny finoana?
8 Nahoana no tena ilaina ny finoana? Mamaly an’izany i Paoly ao amin’ny Hebreo 11:6. (Vakio.) Tsy ho afaka hanatona an’ilay Raintsika any an-danitra sy hahazo sitraka aminy isika, raha tsy manam-pinoana. Ny hidera an’i Jehovah sy ny hifandray aminy rahateo no tena antony namoronana antsika sy ny anjely, nefa mila manam-pinoana isika vao ho afaka hanao izany.
9. Inona no nataon’i Jehovah mba hanampiana antsika hanam-pinoana?
9 Fantatr’i Jehovah fa tena mila miezaka manam-pinoana isika, ka nomeny modely mba hotahafina. Nanendry mpiandraikitra, ohatra, izy mba hitarika ny fiangonana, ary niteny hoe: ‘Tahafo ny finoan’izy ireo.’ (Heb. 13:7) Tsy vitan’izay fa nasainy nosoratana ao amin’ny Baiboly ny tantaran’ireo “vavolombelona maro be toy ny rahona.” Tena nanam-pinoana koa izy ireny. (Heb. 12:1) Mitanisa maro be amin’izy ireo i Paoly ao amin’ny Hebreo toko 11. Tsy ry zareo ihany anefa no resahin’ny Baiboly, fa be dia be. Ao ny tanora, ao ny antitra, ary ao ny lahy, ao ny vavy. Tsy mitovy koa ny zavatra niainany. Samy azo andraisana lesona anefa ny tantaran’izy rehetra, indrindra ankehitriny satria tena vitsy ny olona manam-pinoana.
Ahoana no hanahafantsika azy ireo?
10. Inona no tokony hataontsika rehefa mianatra samirery, mba ho fantatsika tsara ireo olona tantaraina ato?
10 Tsy maintsy fantatrao tsara aloha ny olona iray vao afaka manahaka azy ianao. Nanao fikarohana be àry izahay rehefa nanoratra an’ity boky ity, mba hanampiana anao hahafantatra tsara an’ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana tantaraina ato. Tsara anefa raha mbola manao fikarohana ihany ianao, ary ataovy fianarana samirery mihitsy izy ity ka ampiasao izay fitaovana anananao. Saintsaino ilay tantara, ka alaivo sary an-tsaina mihitsy ny zava-nisy tamin’izany. Eritrereto hoe hoatran’ny ahoana ilay toerana, ary inona avy ny feo renao sy ny fofona henonao. Ataovy tsapanao mihitsy ny fihetseham-pon’ireo olona tantaraina ato. Vao mainka ho fantatrao tsara amin’izay ny toetrany, ka ho lasa toy ny namanao efa hatry ny ela izy ireo.
11, 12. a) Inona no azonao atao mba ho tsapanao ny zavatra niainan-dry Abrama? b) Nahoana no mahasoa anao ny tantaran’i Hana, Elia, ary Samoela?
11 Rehefa fantatrao tsara izy ireo, dia lasa te hanahaka azy ianao. Aoka hatao hoe nahazo fanendrena vaovao ianao. Angamba nasaina hanitatra faritany ianao, na hanandrana karazana fanompoana mbola tsy nahazatra anao na tsy azoazonao. Mieritreritra tsara angamba ianao sady mivavaka momba an’ilay izy. Tsara amin’izay ny misaintsaina ny tantaran’i Abrama. Nanaiky hiala tany Ora izy sy Saray, na dia niadana be aza tany. Nahazo fitahiana be dia be izy ireo, noho izany. Raha misaintsaina an’izany ianao, dia ho vonona kokoa hanahaka azy. Ho tsapanao tsara amin’izay hoe hoatran’ny ahoana ny zavatra niainany.
12 Ary ahoana raha misy mpiara-manompo ratsy toetra aminao, ka kivy ianao ary tsy te hivory mihitsy? Saintsaino ny tantaran’i Hana, dia ho fantatrao izay tokony hataonao. Ratsy toetra taminy i Penina, nefa tsy nahasakana azy tsy hanompo an’i Jehovah izany. Ahoana indray raha mahatsiaro ho tsy misy dikany ianao? Eritrereto izay nanjo an’i Elia sy ny nampaherezan’i Jehovah azy. Ary ahoana raha miady mafy ianao mba tsy ho voatarika haditra, any am-pianarana? Ianaro ny tantaran’i Samoela. Hendry foana izy, na dia hitany daholo aza ny hadalan’ireo zanak’i Ely tao amin’ny tranolay. Ho lasa toy ny namana tsy foinao izy rehetra ireo, raha saintsaininao izay nataony ary tahafinao.
13. Lasa mpaka tahaka fotsiny ve ianao raha manahaka an’ireo olona nanam-pinoana? Hazavao.
13 Lasa mpaka tahaka fotsiny ve ianao fa tsy tena manam-pinoana akory, raha manahaka an’ireny olona ireny? Tsia. Ny Baiboly mihitsy no mampirisika antsika hanao izany. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Na ireo olona horesahintsika ato koa aza mba efa nanahaka an’izay olona niaina talohany. Voalaza ao amin’ny Toko 17, ohatra, fa naverin’i Maria ny tenin’i Hana sasany, ka hita fa i Hana no nataony modely. Tsy midika anefa izany hoe tsy tena nanam-pinoana i Maria. Lasa nanana finoana matanjaka kosa aza izy, ka izany no nahatonga azy ho olona niavaka teo imason’i Jehovah.
14, 15. Inona no mampiavaka an’ity boky ity, ary ahoana no azo ampiasana azy?
14 Natao hanampiana anao hanana finoana matanjaka ity boky ity. Misy lahatsoratra hoe “Tahafo ny Finoan’izy Ireo” ao amin’ny Tilikambo Fiambenana, efa nanomboka tamin’ny 2008. Natambatra ato ireo lahatsoratra navoaka tamin’izay ka hatramin’ny 2013. Tsara homarihina anefa fa nohavaozina sy nasiana fanitsiana izy ireo, ary nampiana fanazavana hafa. Nasiana fanontaniana koa eny ambany pejy, mba hiaraha-midinika sy hahitana ny hevitra azo ampiharina. Feno sary vaovao tsara tarehy koa ato, ary nohatsaraina sy nohalehibeazina kosa izay efa taloha. Hahita sarintany sy daty tsara ho fantatra koa ianao. Natao hianarana samirery sy hanaovana Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana ary hanaovan’ny fiangonana fianarana Baiboly ity boky ity. Na miara-mamaky azy ity fotsiny aza anefa ny fianakaviana, dia efa mahafinaritra.
15 Enga anie izy ity hanampy anao mba hanahaka an’ireo mpanompon’i Jehovah nanam-pinoana fahiny. Hatanjaka kokoa ny finoanao amin’izay, ary hifandray kokoa amin’ilay Rainao any an-danitra ianao.
Hizara Hizara Teny Fampidirana
Tahafo ny Finoan’izy Ireo—Teny Fampidirana